Home Wararka Maxa la filan karaa 9 Feberaayo hadii ayan dalka doorasho ka...
Maxa la filan karaa 9 Feberaayo hadii ayan dalka doorasho ka dhicin
Waxgaradka , siyaasiinta & dhaqanka Beesha Hawiye ayaa mudooyinki u danbeeyay waday abaabul ay ku dhisanayaan dowlad goboleedka banaadir state madaama Gobolka banaadir uusan matalaad rasmi ah ku laheen DFS.
Waxaa sido kale jirtay cabasho balaaran oo ay qabaan beelaha Hawiye taaso ka dhalatay maamul xumada, eexda & qabyaalada hoggaaminta Madaxweyne Farmaajo iyadoo shaqaale rayid, ciidamada & deeganada ay dagaan beelaha Hawiye ay dulmi kala kulmeen MW Farmaajo & milkiilaha dowlada ahna agaasimaha NIS Fahad Yaasiin xaaji daahir.
Sidaasi darteed Beelaha Hawiye waxeey kulmiyeen awoodooda ciidan & dhaqaalle si ay u dhistaan Dowlad Goboleed Banaadir State taaso lafilaayo in Madaxweyne Farmaajo & agaasimihiisa sirdoonka aykasoo horjeestaan sidaasna uu ku bilaawdo dagaal dhiig faro badan ku daata.
4 sano ee hoggaaminta MW Farmaajo ayaa laga dhadhan saday qabyaalad & inuu damacsan yahay aargudasho , wuxuuna bulshada soomaaliyeed dib ugu celiyay kala shakintii qabyaalada oo laga reestay. Waxaa jira warar sheegaya in ay macquul tahay in 9 February in beesha Hawiye isaga baxdo DFS kadibna ay isku dayaan in ay maamul u sameeyaan Gobolka Banaadir kaas oo lamid noqonata dowlad goboleedyada ka jira dalka.